शानदार उपकरण तपाईंलाई एक मासिक सदस्यता बिना नयाँ चलचित्र र टिभी हेर्न अनुमति दिन्छ?
अल्ट्री टिभीसँग विश्वव्यापी बिक्रीको लागि, यो निःशुल्कको लागि तपाइँको मनपर्ने चलचित्रहरू र शो हेर्नको लागि एक राम्रो समाधान हो!
हामी सबैलाई निराशाजनक overpriced केबल बिल र सदस्यता सेवा कसरी हुन सक्छ भनेर थाहा छ।
तपाइँले केबल, Netflix, चलचित्रहरू र खेलहरूको लागि मागमा तिर्नु भएको छ ... यसले थप्छ।
अनि निस्सन्देह त्यहाँ यो हार्डवेयर हो। तपाईंको प्रापक, AppleTV वा Firesticks, डीभिडी प्लेयर र प्रायः स्मार्ट च्यानलहरू।
त्यसैले यो एक आश्चर्यको रूपमा आउँदैन कि अधिक से अधिक व्यक्तिले केबल बिलहरू काट्न सजिलो, सरल समाधान खोज्न र सबै हार्डवेयरबाट हटाउन खोजिरहेका छन्।
धन्यबाद, कानूनी रूपमा कुनै पनि कानूनी रूपमा हेर्ने उपाय हो!
एक अमेरिकी आधारित स्टार्टअप कम्पनी नयाँ नवीन र सस्तो ग्याजेटको साथ आएको छ जसले मान्छेलाई मीडिया खरिद गर्दछ।
यसलाई अल्ट्री टिभि भनिन्छ। यो एक आन्तरिक गृह थियेटर बक्स हो जुन सजिलै संग कुनै पनि टिभि संग जोडिएको हुन सक्छ। यो पहिले नै स्थापित सबै चीजको साथ आउछ र माथि छ र मिनेट भित्र चलिरहेको छ। कुनै प्रविधि थाहा छैन।
यो सब-इन-एक मनोरञ्जन केन्द्र हो जसले तपाईंलाई सबै अन्य हार्डवेयर र रिमोटहरू हटाउन अनुमति दिन्छ। हामी सबै जान्दछौं अनुप्रयोगहरू पहिले नै पूर्व स्थापित छन् जस्तै तपाईले एप्लिकेसन जस्तै AppleTV, अमेजन फिएस्टिक आदि बाट जान्न सक्नुहुनेछ तर एक फरक फरक फरक छ - यो तपाइँलाई निःशुल्क को लागी केहि देख्न अनुमति दिन्छ। कुनै सदस्यता र पूर्णतया कानूनी संग।
सजिलो छ! केवल तपाइँसँग कुनै पनि टिभीसँग अन्तिम TV जडान गर्नुहोस्। सबै केबलहरू प्याकेजमा समावेश छन्। पावर बटन थिच्नुहोस् र गरे। कुनै गम्भीरता छैन, यो शाब्दिक 10 सेकेन्ड लाग्छ र तपाईले चाहानुहुन्छ जुन केहि हेर्न सक्नुहुन्छ।
परम टिभीले पूर्णरुपमा पुन: प्रकाशित गरेको छ र यसलाई पुनःनिर्धारित गरेको छ त्यसैले यो पनि सजिलो काम गर्दछ। अल्ट्रा टिभी टेक्नोलोजी इन्टरनेट खोज्छ जहाँ यसले पत्ता लगाउँदछ र स्ट्रिम गर्नेछ, वास्तवमा कुनैपनि टेलिभिजन शो, हलिवुड चलचित्र, वा लाइभ स्पोर्ट्स इवेंट जसलाई तपाईं भाडामा शुल्क वा मासिक सदस्यता भुक्तानी गर्न चिन्ता बिना हेर्नु पर्दैन।
"यो यन्त्रले मलाई पैसा तिर्खाएको छ!"
तपाईं पनि लाइव टेलिभिजन 24/7 मा टाउको गर्न सक्नुहुन्छ जसमा प्रायः सबै च्यानलहरू जुन तपाइँले तपाइँको स्थानीय केबल कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुहुने छ र सँधै संसारबाट सयौं बढी छन्। सबै अल्ट्रा HD पाठ्यक्रम।
सत्य हुन राम्रो लाग्न के लागी राम्रो हो वास्तविकता हो, कुनै तार जोडिएको छैन। निस्सन्देह तपाईलाई इन्टरनेट चाहिन्छ र त्यो महिनामा केही रकम हो। तर तपाईसँग वैसे पनि छैन? र लोडिङ र बफर समयमा। अन्तिम टिभी स्वचालित रूपमा तपाईंको इन्टरनेट गतिमा समायोजित हुन्छ त्यसैले हरेक प्रकारको सामग्री तुरुन्तै हेर्न सकिन्छ। यदि यूट्यूबले काम गर्दछ Ultimate TV लाई पनि काम गर्नेछ।
नि: शुल्क टिभि हेर्नुहोस्
अल्टटी टिभीको साथ तपाईंले दिमागको शान्ति पाउनुहुनेछ, जान्दछ कि तपाई आफ्नो मनपर्ने कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ।
तर के यो कानूनी हो?
हाँ! निश्चित रूपमा। यो प्रयोग पूर्ण रूपमा कानूनी छ किनकि तपाइँ सामग्री मात्र स्ट्रिमिङ बचत गर्न सक्नुहुन्न। यो यसको बारेमा धेरै कुरा हो।
निस्सन्देह केबल कम्पनीहरु स्थिति संग खुश छैनन् ताकि उनि अल्ट्री टीवी को सार्वजनिक मा बेचने देखि रोकन को कोशिश गर्दै छन्। त्यसैले यसले तुरुन्तै फिर्ता-अर्डर प्राप्त गर्न सक्छ, तर चाँडै तपाईंसँग तपाईं पूर्ण हुनुहुन्छ र सधैंभरिको लागि सबै चीज हेर्न सक्षम हुनेछ - पूर्णतया कानूनी।
कति पैसा यो मलाई खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
तपाईं शायद सोच्नु हुन्छ कि यो उपकरण धेरै महान् छ ... झूटा! अंतिम टीवी एक खरीद 1 चला रहेको छ 1 प्राप्त 1 प्रस्ताव! एक पटक भुक्तानी - सदस्यता छैन, मासिक लागत छैन। यसलाई जाँच गर्नुहोस्!
म कहाँ खरीद गर्न सक्छु?
तपाईं यसलाई यहाँ क्लिक गरेर कम्पनीको वेबसाइटबाट सीधा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: यो धेरै उच्च मांगको रूपमा, मानिसहरू अब बहुविध यन्त्रहरू किन एकैचोटि खरीद गर्दैछन् किनकि तिनीहरू पछि उच्च मूल्यमा पुनः पुन: प्राप्त गर्न चाहन्छन्। कृपया शिपिंगको लागि 1-2 हप्ताको अनुमति दिनुहोस्।
अन्तिम टिभी संसारको कुनै पनि देशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निःशुल्कको लागि कुनै पनि चीज हेर्न सुरु गर्नुहोस् ...
अब तपाईलाई यस शानदार आविष्कारको बारेमा सूचित गरिएको छ, मलाई सेटअप गर्न कति सजिलो छ भनेर। तपाईलाई के गर्न आवश्यक छ यी3चरणहरू पालना गर्न:
चरण 1: आज अल्ट्री टिभीको आदेश 40% अफ बिक्रीको फाइदा लिन।
चरण 2: जब तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, प्याकेज खोल्नुहोस् र तपाइँलाई मनपर्ने कुनै पनि TV मा केबलहरू समावेश गरी पावर बटन थिच्नुहोस्। अन्तिम टीवी तपाईंको Wi-fi कुञ्जीको बारेमा सोध्छ। यसलाई राख्नुहोस् र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
चरण 3: निःशुल्कको लागि केहि हेर्नुहोस् ... अल्टिटेट टिभीले स्वचालित रूपमा तपाईंलाई ब्लकबस्टर वा लोकप्रिय शो देखाउनेछ, र तपाइँ सधै केहि चीज खोज्न र तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ एक टिप छ: अल्टिटी टिभी एक महान वरदान हो किनकि यसले सबैलाई बचत गर्नेछ, जसले यसलाई प्राप्त गर्दछ, पैसाको एक टन!
केबलबाट मुक्त हुनुहोस्
धेरै मानिसहरूले धेरै पटक धेरै यन्त्रहरू खरीद गर्छन् ताकि तिनीहरू पुनः-अर्डर प्राप्त हुन सक्दछ! त्यसैले कृपया ढुवानीको लागि 1-2 हप्तालाई अनुमति दिनुहोस्। "